Wasiirka Dubbe oo u jawaabay dowladda Imaaraadka Carabta.. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Wasiirka Dubbe oo u jawaabay dowladda Imaaraadka Carabta..
Saacado kadib markii dowladda Imaaraadka Carabta ay ku tilmaantay Dowlada Somaliya mid waqtigeeda dhamaaday ayaa waxaa arintaas jawaab kulul ka bixiyay Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe.
Dube oo goor dhow shir jaa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa si adag uga fal-celiyey sida ay dowladda Imaaraadka Carabta uga hadashay isku dhacyadii Jimcihii ka dhacay magaalada Muqdisho.
warbixin ka soo baxday Dowladda Imaaraadka Carabta shalay ayaa looga hadlay isku dhacyadii ka dhashay banaanbaxyadii ay Jimcihii soo abaabuleen musharaxiinta mucaaradka ah, waxayna dowladda Soomaaliya ku tilmaantay mid ku meel gaar ah.
Wasiir Cismaan Dubbe wax laga xumaado ku tilmaamay in dowladda Soomaaliya loogu yeero ku meel gaar, isagoo sheegay inay dowladaha kale ee carabta ka soo gaareen hambalyo ku aadan sidii ay dowladdu ula tacaashay wixii dhacay maalintii Jimcaha ee aan soo dhaafnay.
Previous articleCabdiraxmaan Cabdishakuur oo cambaareeyey dilkii xalay Muqdisho loogu geystay Abkoow Cambuure
Next articleQoraal kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibedda oo u digtay digay dalal si kale u dhigay dhacdadii Jimcihii.